Zavatra 3 ny saka afaka mampianatra antsika momba ny bodisma - Fanahy
Ny saka, toy ny olona, ​​dia mety ho mpikarama an'ady ary tsy ampoizina. Miavaka ny saka tsirairay. Tsy nahalala saka tsara nitombo aho, fa nampitombo fankasitrahana azy ireo tamin'ny faha-20 taonako. Na dia tsy misy saka aza hanao fihetsika mitovy amin'izany tontolo andro na herinandro manontolo, dia nahatsikaritra toetra saka vitsivitsy mahaliana sy miverimberina izay ohatra tsara amin'ny fitsipiky ny bodista aho. Ireto misy telo fotsiny.
vao nanao ny lisitra ianao
1. Tsy atao
Ny hafaliana amin'ny tsy fanaovana dia tsy misy zavatra hafa tokony hitranga mandritra ity fotoana ity.
- Mpampianatra Buddhist Meditation ary mpanoratra Jon Kabat Zinn, ao amin'ny Na aiza na aiza alehanao, dia misy ianao
Raha efa nahita saka tena miala sasatra ianao dia nahita maso ohatra tsara dia tsara amin'ny tsy fanaovana. Ny saka dia afaka mandefa ary mankafy karipetra, fandriana ary / na tara-masoandro amin'ny fialana an-tsokosoko izay sarotra amin'ny olona indraindray. Imbetsaka aho no te hahatsapa ny fiadanam-po saka saka miala sasatra. Raisiko am-pofoanana ny fahatongavan'izy ireo ao am-pofoako ho fahazoan-dàlana hitondrana moramora vetivety.
Ao amin'io boky io ihany, mitanisa teny i Kabat Zinn Thoreau :
maraina ny andro, ary, indro, efa hariva izao, ary tsy misy zavatra tsy hay hadinoina vita.
Ny famelana hanao kely kokoa dia mety mifanohitra amin'ny kolontsaina mandritra ny fotoanan'ny haino aman-jery be loatra sy ny fanerena tsy tapaka hifaninana sy hamokatra. Ny mifanohitra amin'ny tsy fanaovana dia ny tena mahatafiditra ny fanaovana zavatra amin'ny fomba tena mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny ezaka sy angovo ilaina fotsiny, ary tsy misy intsony, ny hetsika dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny famolavolana sy ny fahamendrehana izay manan-talenta sy misy tanjona.
Araka ny lazain'ny Buddha, azonao atao ny mitady manerana an'izao rehetra izao ny olona iray izay mendrika ny fitiavanao sy ny fitiavanao mihoatra noho ny tenanao, ary izany olona izany dia tsy ho hita na aiza na aiza. Ianao tenanao, sahala amin'ny olon'izao rehetra izao, dia mendrika ny fitiavanao sy ny fitiavanao.
- Mpampianatra Buddhist Meditation sy mpanoratra Sharon Salzberg, ao amin'ny famindram-po
Tsy mila mampianatra saka saka tia tena ianao dia tia ny tenany eo noho eo sy amin'ny fomba feno. Tahaka ny zanak'olombelona, ​​rehefa zanak'alika izy ireo dia tiany izay mahafinaritra sy izay mahatsapa tsara ary manenjika azy amin'ny faniriana tsy ankijanona. Io toetra io, ho an'ny saka maro, dia maharitra amin'ny fiainany manontolo. Milelaka sy mikarakara ny tenany izy ireo, mamelatra mihaingo, ary milaza amin'ny hafa ny zavatra ilainy, matetika miharihary.
tena manambady ve i lana sy bobby lashley
Tsy fantatra amin'ny famoizam-po amin'ny fitiavana sandoka izy ireo. Ny fihetsika raisin'ny saka rehefa mangataka na mitaky ny hisarihana ny saina sy ny fitiavany (saingy matetika amin'ny fomba tena tiany ihany) dia maodely tsara amin'ny fahalalana sy fangatahana izay tadiavinao. Rehefa miaraka amina olona atokisany ny saka dia maodely faran'izay tsara izy ireo amin'ny fandraisana firaiketam-po tsy am-pitiavana. Ny fanatanterahana ny zavatra ilainao dia a fitsipika fototry ny fitiavan-tena .
Mety misy fotoana, toy ny saka izay mangataka sakafo amin'ny alàlan'ny meow mafy na manosika saka iray hafa tsy hihinan-kanina, izany fitiavana izany dia tonga miaraka amina fizakan-tena sy ny fitiavan-tena, na izay mety hoheverin'ny Buddhist iray ho voafatotry ny ego na ny fihazonana. Saingy afaka mianatra avy amin'izany koa isika, ary misaintsaina hoe amin'ny fotoana inona, amin'ny fiainantsika manokana, dia mety ho toy ny saka manarona fihinana.
Heveriko fa ny ankamaroan'ny olona nankafy finamanana feno fitiavana tamin'ny saka dia hanaiky fa tsy biby feno fitiavan-tena tanteraka izy ireo, ary maro no fantatra fa mikoropaka, manaraka, mandry, milalao ary mifanerasera amin'ny olona amin'ny fomba tsara fanahy. Tsara vintana aho niara-nipetraka tamin'ny saka iray antsoina hoe Monster izay iray amin'ireo fanahy malemy fanahy sy nilamina indrindra nifanena tamiko.
Iza aho? Ny valiny bodista lalina amin'ity fanontaniana manokana ity
3. Miaina malalaka ao anatin'ny fotoana fohy
Mba ho tenanao - foana ny tenanao - tsy mifikitra amin'ny taloha. Rehefa miteny ianao hoe “Hai! [Eny!] ”Manadino ny momba anao ianao ary mahazo aina vaovao. Ary alohan'ny hahatongavan'ny tena vaovao dia ho antitra ianao, dia tokony hiteny hafa hoe “[Eny!]” Na tokony handeha an-dakozia ianao.
Suzuki dia milazalaza ny fizotran'ny fiainana tsy azo tsaboina tsindraindray, ary manoro hevitra izahay hihiaka hoe “Eny!” rehefa misosa isika, ny tenantsika. Ny saka dia afaka miova haingana be manomboka amin'ny fialan-tsasatra ka hatramin'ny filalaovana raha kilalao volom-borona no himasoana amin'ny sofiny. Ny saka dia miteny hoe eny ary manaraka ilay kilalao, na dia tsy nikasa ny hanao izany aza izy minitra vitsy lasa izay. Ny saka dia mamaly amin'ny fotoana mety amin'ny fahatsapana fa mety amin'ny azy ankehitriny raha misy boaty baoritra, dia mety hitrandraka, hatory, na hanafika azy ireo izy ireo, arakaraka ny faniriany.
zavatra mamy hatao amin'ny sakaizanao
Ireo toetra roa voalaza etsy ambony: ny saka mahay mampihatra ny tsy fanaovana sy mitia tena, dia porofo misimisy kokoa an'io toetra fahatelo io, miaina amin'izao fotoana izao . Ny famelana ny tsy fanaovana sy ny fanekena ny tena dia lasa lavitra amin'ny fiainana malalaka sy ny fanatrehana. Na dia lasa saka be an-trano aza ny saka miara-mipetraka aminay, dia mitazona ny grounding ny fisian'ny vatany (izay ahafahan'izy ireo miaina ny fotoana mivantana) izay toetra mampiavaka ny zavaboary izay mifandray hatrany amin'ny natiora.
Rehefa mahita Sandpiper eny amoron-dranomasina mitsambikimbikina manamorona ny fasika amin'ny lohaliny mihemotra ianao, na liona miala sasatra amin'ny ahitra miaraka amin'ny fianakaviany amin'ny programa natiora, dia azonao atao ny mahita fa miaina tsara ny vatany sy ny fotoana iainany izy ireo. Ny saka, na dia mifanaraka amin'ny kolontsain'olombelona aza, dia mbola manana fahaizana voajanahary izay azontsika ianarana avy amin'izany. Milaza izy ireo hoe aiza no misy azy ireo amin'ny fiainana ao amin'ny vatany ary mamaly am-pahalalana ny manodidina azy ireo .
Wendell Berry dia nanoratra tao amin'ny The Peace of Wild Things,
iza no mampiaraka selena gomez
Tonga amin'ny fiadanan'ny zava-miaina izay tsy mandoa ny fiainany amin'ny fiheverana alahelo aho.
Mijanona amin'izao fotoana izao, mamela ny tenantsika, mitia ny tenantsika, tsy manao - baiko avo lenta hanatanterahana izany. Mazava ho azy fa ny saka, toy ny olona, ​​dia mety ho hafahafa, mahery setra ary mampikorontan-tsaina, ary tsy mandrakariva ny fampianaran'ny Buddhism. Ny tiana ambara dia, tsotra, fa ny saka dia izy tenany ihany. Miaina ny fiainany ao an-trano ao amin'ny vatany izy ireo.
Olona maro no somary nihatakataka tamin'ny vatany, ny fotoana ankehitriny, ary izao rehetra izao voajanahary, ary mitolona amin'ny fahazoana ny fahatsapana ny famelana sy ny fananana ary ny fampiraisana. Ny fatoriana, fikolokoloana tena ary filalaovana saka dia mety ho fanombohana tsara.
inona no hatao alohan'ny hatory
Te hankafy ny fiainako aho
ny fomba handratrana lamosina
inona no tiana amin'ny lehilahy